Narcodata, Tetikasam-panaovan-gazety iray famakafakana rakitahiry milazalaza ny zavamisy manodidina ny adin-drongony ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2015 12:32 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsary fampidirana ao amin'ny Narcodata.
Firenena anjakazakan'ny andian-jiolahy mpanondrana rongony sy mpamono olona eo amin'ny fiainana andavanandrony i Meksika, ka sarotra ny mitsongodia hoe iza no miaraka amin'ny jiolahy ary mivelatra hatraiza ny ambaindainy. Misy tetikasa fanaovan-gazetin-drakitahiry [data] ataon'ny tranonkalam-baovao mahaleotena Animal Político sy ny sehatra fiarahamiasa amin'ny fanaovangazety an-drakitahiry Poderopedia manatsotra izany rakitahiry sarotra raisina ao ambadiky ny tsy fahombiazan'ny ady ifanaovan'ny firenena amin'ny mpanondrana rongony tao anatin'ny efapolo taona farany izany.
Amin'ny fampiasana [lahatsoratra] “mora takarina”, kisarisary ifanakalozankevitra no ilazan'ny Narcodata ny fomba nahaterahan'ny tambajotran-drongony, iza no lehibeny, ny ady ifanaovan'izy ireo, ny fifitarany ara-jeografika ary ireo heloka bevava nataony fantatra.
Tamin'ny herintaona no nivoahan'ny hevitra hanaovana ity tranonkala ity, tamin'ny 21 Oktobra 2014, rehefa nahazo alalana — noho ny lalànan'ny mangarahara tao amin'ny firenena — ny Animal Político hanangona dosie avy amin'ny lehiben'ny fampanoavana izay mampiseho ireo sokajin-andian-jiolahy isankarazany miasa ao Meksika sy ny tambajotra anaovany tatitra. Ampongatry ny dosie ao ihany koa ny “anganongano” avoakan'ny governemanta tahaka ny iray ilazana fa tsy misy andian-jiolahy intsony i Mexico na ny hoe miharesy tosika ireo andian-jiolahy nandritra ity fitantanam-panjakana amin'izao fotoana izao ity.
[…] Ny zavaniainan'i Poderopedia no ahafahantsika mahita ireo tambajotra ho manana ny tanjany ao amin'ny fitantanam-bahoaka.
Azavain'ny Narcodata ihany koa ny toe-javamisy manodidina ny toe-draharaha hahatakarana ny tantara maizin'ireo andian-jiolahy ao Meksika sy ireo mpandray anjara nahatonga ny fivelarany.
Ny lahatsoratra navoakany voalohany, “Siete presidentes, pocos resultados: 40 años de expansión del crimen organizado” (Filoham-pirenena fito, vokatra kely: 40 taonan'ny fivelaran'ny andian-jiolahy mpamono olona) no manasongadina ny anjara toeran'i Etazonia nanabe voho ireo tambajotran-drongony ao Meksika:
Ny tsy fahombiazan'ny tetikadin'ny [governemanta] no manazava ny mbola mampiangana sy mampatanjaka ireo andian-jiolahy, saingy tsy mety ho takatra ny fandrosony raha tsy heverina i Etazonia, ilay tsena lehibe indrindra amin'ny fanjifana rongony tsy ara-dalàna eto amin'izao tontolo izao sady mpivarotra fitaovam-piadiana betsaka indrindra ho an'ireo andian-jiolahy.
[…] Nahazo fahefana bebe kokoa ireo andian-jiolahy Meksikana noho ny mora ahazoan'izy ireo fitaovam-piadiana. Folo taona tany ho any izany ny filoha George W. Bush no nandravana ny lalàna ao Etazonia mandrara ny fivarotana fitaovam-piadiana tsy mila fahanana lava sy entina manafika. Tamin'ny 2014, ny 71.9% -n'ny fitaovam-piadiana azo dia avy tao Etazonia, araka ny filazan'ny Birao misahana ny toaka, paraky, basy ary zava-mipoaka (ATF).
Tafiditra ao anatin'ny piesy ny antsafa nifanaovana tamin'i Guillermo Valdés, talen'ny sampam-pitsikilovana Meksikana teo aloha CISEN (Foibem-pikarohana sy fiarovam-pirenena). Nohazavainy fa efa ela ny tetikadin'ny mpitandro ny filaminana no nifantoka tamin'ny fandraofana rongony sy fitaovam-piadiana ary tamin'ny isamborana ireo lehiben'ny jiolahy misahana rongony, nefa ny tokony iasany dia eo amin'ny fanamafisana ireo andrim-panjakana eny ifotony tahaka ny polisy sy ny fitsarana mba isorohana ny kolikoly sy iantohana fa tompoina tokoa ny rariny.
Teo amin'ny famelabelarana ny fomba tsy nahombiazan'ny governemanta tamin'ny famahana ny olona, dia niteny tamin'ny Narcodata nandritra ny antsafa hamoahana lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Con Peña Nieto, ‘El Chapo’ y Jalisco Nueva Generación dominan el negocio de la droga” (Miaraka amin'i Peña Nieto i ‘El Chapo’ sy ny Jalisco Nueva Generación no mifehy ny aferan-drongony) i Alejandro Hope, tonia ara-piarovana ao amin'ny tranonkalam-baovao El Daily Post :
Mety ilaina ny polisy hamandrihana ireo lehiben'ny fivarotan-drongony, saingy tsy tsara amin'ny fisorohana tsy haka vola amin'ny mpitondra fiarakaretsaka na mpandraharaha na vehivavy, avela eo ampelantanan'ireo vondrona izay nivoaka avy ao amin'ny fahavakisan'ny fikambanana vaventy. Ilaina ny fahatanjahan'ny polisy eny ifotony, ilaina ny mpampanoa lalàna avy amin'ny fanjakana manana fahefana hitondra raharaha hamelezana ireo mafia ao an-toerana, ilaina ny rafitra ara-pitantanana fonja tsy marefo, ary izay no mahatonga antsika mikatso eto sy mahatonga ny tsy fahazoan'ny governemanta ankehitriny vokatra.
Ary ny amin'ny fiitaran'ny herisetra izay enta-mavesatra ho an'ny firenena, azavain'ny Narcodata ny antony mampatanjaka ireo andian-jiolahy mitam-piadiana manohana ireo tambajotran-drongony satria miroborobo ny “vadin'afera” maka an-keriny, fitsentsefana, fanondranana olona ary ny fanafihana ny sivily:
Lasa mahazatra ny fanafihana ny sivily taorian'ny taompolo 1990s rehefa nanenjana kokoa tamin'ny alalan'ny fandraisana sampana mitam-piadiana na andian-jiolahy natokana hamono sy nampiasaina hidaroka vondrona hafa mpifaninana sy ireo olom-pirenena ny fikambanan-jiolahy. […]
Ny fivelaran'ny sampana mitam-piadiana ihany koa dia nampiakatra ny fandrobàna ny fiarahamonim-pirenena. Lasa asa fanaon'ireny vondrona ireny andavanandro ny mamelo-tena ara-bola. […]
Efa ela no nifanandrina tao anatin'ny ra mandriaka niafara tamin'ny fahafatesana, fanjavonana ary famindrana olona ao Meksika an'aliny ireo fikambanan-jiolahy hifehezana ny tsena tsy ara-dalànan'ny rongony, izay nokajikajiana ahazoana vola anelanelan'ny 18 – 39 miliara dolara US isan-taona.